သင့်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးနေပြီဆိုတာဒါမျိုးတွေကပြောပြနေ… – Trend.com.mm
Posted on October 7, 2018 October 4, 2018 by Shun Lei Phyo
ရာသီဥတုကမအေးပဲပုံမှန်အပူချိန်မှာရှိနေတာတောင် အနွေးဓာတ်ကိုပဲတောင်းတနေတတ်ပြီးသူများတွေထက်ပိုပြီးချမ်းတုန်နေတတ်တာမျိုးပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကျောက်ကပ်ကကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်တဲ့အခါ ချမ်းစိမ့်စိမ့်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်လာတတ်တာမလို့ သူများထက်ပိုပြီးချမ်းတုန်ကာ အချိန်တိုင်းလိုလိုအနွေးဓာတ်လိုနေပြီဆိုရင်တော့ သင့်ကျောက်ကပ်ကိုသတိထားဖို့လိုပါပြီ။
2. ခံတွင်းနံကအမြဲလိုလို နံနေလိမ့်မယ်
ဘယ်လောက်ပဲသွားတွေတိုက်တိုက် အမွှေးတွေဖြန်းဖြန်း ခံတွင်းအနံ့ကနဂိုထက်ပိုပြီး ဆိုးဆိုးဝါးဝါးခံစားနေရပြီဆိုရင်တော့ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့တဲ့ အရာတစ်ခုလို့ဆိုရပါမယ်။ကျောက်ကပ်မကောင်းတဲ့သူတော်တော်များများရဲ့ခံတွင်းအနံ့ဟာ ပုံမှန်နံတာထက်ကိုပိုဆိုးဝါးပြီးပြင်းထန်တဲ့အနံ့မလို့ဒါမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ကျောက်ကပ်ကိုစစ်ဆေးသင့်ပါပြီ။
3. ခြေဆစ်တွေ ရောင်ရမ်းတာမျိုး
ခြေဆစ်တွေ ခြေချင်းဝတ်တွေဟာ အကြောင်းမဲ့သက်သက် ခဏခဏရောင်ရမ်းနေပြီဆိုရင်ဒါလည်းကျောက်ကပ်မကောင်းတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပါပဲ။
4. မကြာခဏအပြင်းဖျားပြီး နောက်ကျောဘက်ကနာကျင်ကိုက်ခဲတာမျိုး
မကြာခဏအပြင်းဖျားပြီး ကျောဘက် တွေခါးနားတစ်ဝိုက်တွေနာကျင်တာကလည်း ကျောက်ကပ်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါပဲ ။ အထူးသဖြင့် ခါးအောက်ပိုင်းတွေနာကျင် ကိုက်ခဲပါများလာရင်ပိုလို့သတိထားသင့်ပါတယ်။
သွေးတိုးဓာတ်ခံရှိတဲ့သူတွေလည်း ကျောက်ကပ်မကောင်းဘူးလို့ဆိုရမှာပါပဲ။ သွေးတွေဓာတ်ခံမရှိရင်တောင် ချက်ချင်းကြီးဆိုသလို သွေးခဏခဏဆောင့်တတ်တာမျိုးဖြစ်ရင်တော့ဒါဟာ သင့်ကျောက်ကပ်ကသေချာအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာကိုပြောပြနေတာပါပဲ။